London: Haweenay Uur Leh Oo Midi Lagu Dilay iyo Ilmihii Yaraa Oo Xaalad Culus Ku Jira – HCTV
London: Haweenay Uur Leh Oo Midi Lagu Dilay iyo Ilmihii Yaraa Oo Xaalad Culus Ku Jira
Ahmed Cige 0	June 30, 2019 2:36 pm
Itoobiya Oo marti gelinaysa shirka dhaqaalaha dunida
London, (HCTV) – Haweenay 26 jir ah, oo lagu qiyaasay in sideed bilood ay xaamilo ahayd (uur lahayd) ayaa lagu dilay weerar loo adeegsaday Midi, sida ay sheegeen ciidamada bileyska ee dalka Ingiriiska ee Metroplitan Police.
Kiiskan lagu weeraray haweenaydan ayaa noqonaya falkii ugu dambeeyey ee Mindi loo adeegsaday ee dhaca saacadihii la soo dhaafay, waxaana markii dambe magaceeda lagu xaqiijiyey haweenaydan la dilay inay tahay Kelly Mary Fauvrelle taas oo ku dhimatay Thornaton Heath, oo ku taala Koonfurta London.
Hase yeeshee hanaanka dagdaga ah oo lagaga soo saaray ilmihii yaraa ee caloosha ku jiray ayaa hada ku jira xaalad adag cusbitaalka gudihiisa kadib markii hooyadii ay noqotay dhibanihii u dambeeyey ee dabiyada midida ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayey magaalada London.
“Tani waa dhacdo naxdin badan in hooyo sidaa u da’yar ay nolosheeda waydo ilmaheedii yaraana uu xaalad adag uu ku sugan yahay,” sidaasi waxa yidhi Madaxa Baadhista Mick Norman oo warbaahinta la hadlay.
Falkan foosha xun ayay ciidamada Bileyska ee Metropolitan Police ay sheegeen in loo xidhay nin 29-jir ah, kaas oo looga shakisan yahay dilkaasi waxaanu wakhtixaadiran ku jiraa xabsi.
Inkastoo bileysku ay markii hore xidheen nin 37 jir ah balse markii dambe ayaa damaanad lagu sii daayey waxaana ku socda baadhis.